Imigomo Yokubuka Iglosari - Buka I-Rapport
Imibandela Nezincazelo Zokubuka
Buka amatemu wabathengi nabathengisi emhlabeni jikelele.
Ingilazi ye-Acrylic yinto ekhiqizwayo, ebonakalayo engakhiwa kalula ezinhlakeni ezithile zokushisa. Ingilazi ye-Acrylic ivikela kakhulu isimo sezulu kanye nokwehlukana nokugqwala. Ukuklwebheka okuncane kungapholishwa kalula.
Ikhalenda lonyaka liyinkinga lapho usuku lwayo kuphela okufanele lulungiswe ngesandla kanye ngonyaka ekupheleni kukaFebhuwari.
Iwashi elilwa namandla kazibuthe
Iwashi elilwa namandla kazibuthe lihlala lingenathonya kumandla kazibuthe aze afike emandleni athile futhi kufanele futhi liqhubeke nokugijimisana ngqo nezinga elithile ngemuva kokuvezwa. Izinkambiso i-DIN 8309 ne-ISO 764 zibeka izindinganiso zamawashi aphikisayo.
Ngokuya nge-DIN 8309, amawashi anobubanzi bokunyakaza obukhulu kunama-20 mm count njengama-anti-magnetic lapho engathintwa amandla kazibuthe afinyelela ku-4,800 A / m (6 mT) futhi aphambuka ngemizuzwana engeqile + +-- 30 kumasekhondi ngosuku.
Ukumbozwa okulwa nokubonisa kukhulisa ukubonakala nokucaca kwengilazi yokubuka. Yehlisa ukubonakaliswa, ikwenze kube lula ukufunda iwashi.
Abenzi bamawashi benza ingubo yokulwa engakhanyi ngokusebenzisa ungqimba oluncane, olusobala engilazini yokubuka ngaphansi komshini. Eyaziwa nangokuthi i-AR coating.
I-othomathikhi ibhekisa ekusongweni okuzenzakalelayo kwesilinganiso sewashi. Umthombo uyalimala ngokunyakaza kwesihlakala nengalo yalowo ogqokile. Lokhu kwenzeka ngokuhlangana nesisindo (i-rotor), eshukumisa futhi sibambe intwasahlobo. Kusetshenziswa umshini wokubamba oshibilikayo entwasahlobo ngenhloso yokuwunqanda ungabhujiswa wumoya omningi kakhulu. Umshini omkhulu we-rotor usakazeke kakhulu.
IBakelite igama lokuhweba ngepulasitiki elenziwe ngokuphelele elenziwe usokhemisi waseBelgian-American uLeo Baekeland ngo-1905. Izinto ezinjengamasondo okuqondisa, imisakazo, izingcingo, nezibambo ezivela ezimbizeni nasemabhulukweni zenziwe ngalolu hlobo lokumelana nokushisa.
Bona isiphethu sezinwele
Isondo lokulinganisa lilawula ukushaya kwewashi elingumshini ngokunyakaza kwalo okungaguquki, okubizwa ngokuthi amabhithi. Inomphetho webhalansi oyindilinga futhi ezincazelweni eziningi, intwasahlobo yezinwele nayo ibhekwa njengengxenye yesondo lebhalansi. Isondo lebhalansi lithatha umsebenzi wamasekhondi pendulum atholakala kumawashi kayisemkhulu newashi lodonga; noma kunjalo, inyakaza ngokushesha okukhulu. Namuhla, isivinini esijwayelekile singama-21,600 noma ama-28,800 alternation (beats) ngehora, kuyilapho imizuzwana i-pendulum ihamba kuphela ku-3,600 A / h. Ukuthi iwashi ligijima ngokunembile kanjani kuncike kwinani nasekujwayeleni kokudlidliza. Ukuphunyuka kuhlinzeka kancane kancane isondo lokulinganisela ngamandla avela entwasahlobo, lilibeke ekunyakazeni okuya emuva naphambili.
Ibha iyunithi yengcindezi yemethrikhi ekhombisa ukuthi isisindo esingakanani siphezulu. Amanye amayunithi wokulinganisa kwengcindezi yi-standard standard (atm) noma i-pascal (Pa).
Ibha ye-1 = 100 kPa = 0.1 MPa
Ibha engu-1 icishe ilingane nengcindezi yomoya esemkhathini womhlaba noma ingcindezi yolwandle ekujuleni kwamamitha ayi-10.
Intsimbi esongwe isemgqonyeni. Imithombo enkulu igcina amandla adalwe lapho iwashi lilinyazwa.
I-bezel yindandatho ezungeze ngokuphelele ingilazi yokubuka. Kungaguquguquka noma kulungiswe. Amawashi wokuntywila afaka i-bezel ejikajika e-un-direction enezimpawu zomzuzu zokugcina ithrekhi yesikhathi sokuntywila. AmaChronographs ajwayele ukuba nesikali se-tachymetric ku-bezel engaguquki ukuze kukalwe ijubane elijwayelekile. Ama-Bezels ngokuvamile enziwe ngensimbi noma nge-ceramic.
I-Bicompax ibhekisa kwinani lama-subdials (amathotho) kwi-chronograph. Isakhiwo seBicompax sinezinqolobane ezimbili ngehora lesi-3 nelesi-9. I-Tricompax inezintathu, ezakha ukwakheka kwe-V.
I-Bluing isho inqubo yokushisa izingxenye zensimbi kancane kuze kufike ku-300 ° C (572 ° F). Lokhu kubangela ukugqokiswa okuncane kakhulu, okuluhlaza okwesibhakabhaka ukumboza ingxenye efudumele. Abenzi bewashi basebenzisa le nqubo ukuze bacwenge izandla, izikulufu, nezinye izinto. Le nqubo ivame ukubonwa emawashini akhiqizwa eGlashütte, eJalimane.
Intwasahlobo yebhalansi ye-Breguet
Intwasahlobo yebhalansi ye-Breguet iyisiphethu sokulinganisa lapho ikhoyili yayo yokugcina iphakanyisiwe, ngaleyo ndlela inciphisa ukugobeka kwayo. Yasungulwa ngu-Abraham-Louis Breguet ngo-1795. Ukuma kwayo okugxile kuvumela intwasahlobo ukuthi "iphefumule" kangcono futhi kugcina iwashi lisebenza ngokunembile. Eyaziwa nangokuthi i-overcoil yaseBreguet, intwasahlobo yaseBreguet, noma isizinda sezinwele seBreguet.
Izihlanganisi ze-Butterfly ziyizigaxa ezivuleka ekugcineni ngakunye, zandisa isongo inani elibalulekile nokwakha ukuvuleka okubanzi.
I-Caliber elinye igama lomnyakazo wewashi. Ihlala isetshenziswa ngokuhlanganiswa namagama wokubuka wezinombolo, afana ne- "Caliber ETA 2824-2." Ubukhulu obupelwe futhi.
Iwashi elinamasekhondi aphakathi nendawo linesandla sesibili esixhunywe kwi-eksisi yesikhungo efanayo nezandla zomzuzu nehora. Ozakwabo kumasekhondi aphakathi nendawo yimizuzwana emincane, lapho amasekhondi akhonjiswa ku-subdial encane, imvamisa ngehora lesithupha. Imizuzwana emincane ivame ukutholakala kuma-chronographs asebenzisa isandla esiphakathi nendawo njenge-chronograph second hand.
ICerachrom yi-Rolex's in-house ceramic. Izinto zobuchwepheshe obuphezulu zimelana ngokukhethekile futhi zinzima.
I-Chamfering, ebizwa nangokuthi i-beveling, iyindlela eyinkimbinkimbi yokuqedela ukunyakaza kwewashi lapho imiphetho yenziwa khona ukuthambekela nge-45 ° angle futhi ipholishiwe. Ububanzi bemiphetho buhlala bunjalo.
Indlela ye-chiming iyindlela ehlukile ewashini lokukhanda. Isando sishaya umzimba ozwakalayo, njenge-gong, ukudala ama-chimes, atshela isikhathi ngochungechunge lwemisindo.
AmaChronographs anomsebenzi wesitophuwashi, ongasetshenziselwa ukubeka isikhathi izinto ezifana nemicimbi yezemidlalo.
Ama-chronometer alinganisa ngokunemba ikakhulukazi okuqinisekiswe ngokunemba ngumzimba osemthethweni. Ukuhlolwa kweChronometer kwenziwa kakhulu yi-Official Swiss Chronometer Testing Institute (French: Contrôle officiel suisse des chronomètres, COSC). IHhovisi leTuringian for Weights and Measures (isiJalimane: Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen) eGlashütte, eJalimane, nalo linikeza izivivinyo ze-chronometer.
Umenzi wamawashi waseNgilandi uGeorge Daniels wasungula ukweqa kwe-co-axial ngawo-1970 njengenye indlela yokuphunyuka kwesibindi saseSwitzerland. Lithola igama lalo kumasondo amabili okuphunyuka abekwe kushaft, elinye ngaphezu kwelinye. Ubuhle balokhu kweqa ukuthi kunciphe kakhulu ukungqubuzana phakathi kwamasondo amabili. Ngakho-ke, uhlelo lokubaleka ludinga ukuthambisa okuncane futhi lisebenza isikhathi eside ngaphambi kokudinga ukulungiswa. U-Omega uphinde wakhulisa ukweqa kwe-co-axial kwaba uchungechunge lwamawashi ngasekupheleni kweminyaka yama-1990. Iningi lamawashi e-Omega akhona manje anokulinganisa ngalolu hlelo lokuphunyuka.
Inkinga iwumsebenzi owengeziwe wokubuka. Isigaba senyanga, i-alamu, umsebenzi wesikhathi, noma ikhalenda engapheli konke kuyizinkinga ezivamile. Zibekela inselelo abenzi bamawashi, ikakhulukazi uma kunezinkinga eziningi enyakazisweni eyodwa yewashi.
Usuku lukhonjiswa ngesandla (idethi yesandla) noma izinombolo eziphrintiwe eringini elifihlwe ngaphansi kokudayela. Iwindi ekudayalweni lenza ukuvula lapho kukhonjiswa khona usuku lwamanje. Izandla noma iringi ngayinye zenza ukuzungezisa okukodwa kungakapheli izinsuku ezingama-31. Uma kuyinyanga enezinsuku ezingaphansi kwezingu-31, isibonisi sosuku kufanele silungiswe ngesandla.
Usuku lombukiso wesonto
Usuku lwesiboniso sesonto lubonisa usuku lwamanje lweviki ekudayeleni.
Iwashi lokuntywila (elibizwa nangokuthi iwashi lokuntywila, iwashi labatshuzi) lilungele ukusetshenziswa ngenkathi lishayela ngokuzilibazisa noma ngokomsebenzi. Izindinganiso ezijwayeleke kakhulu ezisetshenziselwa amawashi okuntywila yi-ISO 6425 ne-DIN 8306. Iwashi kumele lingabi namanzi okungenani ibanga elingu-100 (ibha eli-10). Amawashi wokutshuza asezingeni eliphakeme ngokuvamile awanamanzi okungenani angama-200 m (ibha engama-20), anezandla ezikhanyayo nezinkomba, futhi anebezel enezimpawu zomzuzu. I-bezel ingazungeziswa kuphela ohlangothini olulodwa ukuze kugwenywe umuntu ogqokile okwandisa ngengozi isikhathi sokutshuza. Amanye amawashi wokuntywila angamelana nokujula kwamamitha ayi-1,000 XNUMX nangaphezulu; lezi zivame ukuba ne-valve yokuphunyuka ye-helium.
Umgqomo ophindwe kabili
Lapho ubukhulu buba nemiphongolo emibili, kungachazwa ngokuthi umgqomo ophindwe kabili. Lokhu kunweba amandla okugcina iwashi.
I-chronograph ephindwe kabili
I-chronograph ekabili ingaba ngezikhathi ezithile. Ukuze wenze lokhu, inezandla ezimbili zesibili ze-chronograph nezicucu ezintathu zokuphusha. Okokuqala, zombili izandla zesibili ziqalwa ngokucindezela ucezu lokucindezela. Ingcezu yesibili yokucindezela imisa esinye sezandla zesibili futhi ikuvumela ukuthi ufunde ukuthi kudlule isikhathi esingakanani, kanti esinye isandla sesibili sigcina sisebenza. Ingcezu yesithathu yokucindezela iqala isandla sesibili esimisiwe futhi. Eyaziwa nangokuthi i-rattrapante chronograph, i-split-second chronograph, ne-split chronograph. Akufanele kudidaniswe ne-chronograph ye-flyback.
UDubois Dépraz ungumkhiqizi wezinkinga zokubuka.
Umkhiqizi we-ETA SA Swiss Watch
I-ETA SA Manufacture Horlogère Suisse (i-ETA SA Swiss Watch Manufacturer) ingumkhiqizi wenhlangano yamawashi waseSwitzerland weSwatch Group.
Isondo lokweqa liyingxenye yokunyakaza kwamawashi okuphunyuka kwemfoloko yepallet. Isondo lokweqa likhona phakathi kwesitimela nesondo lokulinganisa. Imfoloko yamapallet idala ukuxhumana phakathi kwesondo lokulinganisa nesondo lokuphunyuka. Isici sesondo lokuphunyuka ngamazinyo asymmetrical.
Ukuphunyuka kuqinisekisa ukukhishwa okuzinzile, okulawulwayo kwentwasahlobo enamanxeba. Umshini uvala njalo isitimela segiya, kwakheke ijubane elilinganayo. Ngasikhathi sinye, idlulisela amandla amasha kusistimu ye-oscillation.
Amawashi esihlakala sanamuhla asebenzisa kakhulu ukuqhuma kwesibindi saseSwitzerland, okuqukethe imfoloko yepallet nesondo lokuphunyuka. Amasondo okuphunyuka ahlangana ngqo nesondo lemizuzwana (elaziwa nangokuthi isondo lesine). Isandla sesibili sinamathiselwe ku-ekseli le-wheel wheel. Isondo lokulinganisela lishintsha liye emuva naphambili futhi lenze ukuthi imfoloko ye-pallet ihambisane ngokufanayo emuva naphambili. Ngakho-ke, ingabamba futhi ikhiye isondo lokuphunyuka nepallet ngaphambi kokuyidedela iphinde ikhiye futhi. Lokhu kuvumela isondo ukuthi likwazi ukuhambisa izinyo elilodwa ngesikhathi. Kumvamisa yebhalansi engu-28,800 A / h (4 Hz), lokhu kubangela ukuthi isandla sesibili sihambe kasishiyagalombili.
Igolide i-Everose yi-Rolex's 18-karat rose gold alloy. Ngenxa yokusetshenziswa kweplathinamu ku-alloy, kufanele ihlale isikhathi eside icwebezela kunegolide elijwayelekile le-rose. Umbala obomvana we-alloy uqhamuka ethusi.
Ukuqedela (isiFulentshi: i-finissage) kubhekisa ekucwengweni kokunyakaza kwewashi. Ukuqedwa kwendawo ejwayelekile kufaka phakathi imihlobiso efana nemivimbo yaseGeneva, i-perlage, noma i-sunbursts. Izikulufo ze-Bluing kanye ne-chamfering nakho kuyizindlela zokuqeda.
I-chronograph ebuyela emuva inomsebenzi okhethekile wesikhathi. Lapho nje isebenza, ungayisetha ibuyele ku-zero bese uqala futhi ngokucindezela inkinobho. Lapho i-chronograph ejwayelekile isebenza, ngakolunye uhlangothi, idinga ama-push amathathu: eyodwa ukumisa i-chronograph, enye ukuyibeka kabusha ibe yi-zero, bese enye uyiqale futhi. Ama-chronographs kaFlyback aqhamuka emkhakheni wezindiza wezempi. Zisetshenziswa lapho izindlela eziningi ezilandelanayo kufanele zenziwe ngomzuzwana ofanele. I-chronograph ejwayelekile yehlulekile ukufeza lo msebenzi, ngoba ukusunduza okuthathu okudingekayo ukusetha kabusha kungathatha isikhathi esiningi.
Ibhande lokugoqa liyindlela yokuvula nokuvala ibhendi lewashi. Ngokungafani ne-pin buckles, ukugoqa amabhakede kuvuleke kwi-hinge. Imichilo enamaphini amabhande, ngakolunye uhlangothi, ivuleka ngokuphelele. Eyaziwa nangokuthi i-depp clasp.
IGMT imele iGreenwich Mean Time. Yisikhathi esichazwe ngomkhathi eGreenwich, isifunda saseLondon. Ekuqaleni yayisetshenziswa njengezikhathi zomphakathi zomhlaba wonke, kepha i-UTC (Isikhathi Esibumbene Somhlaba Wonke) yathatha leyo ndima kusukela ngo-1972.
Iwashi le-GMT libonisa isikhathi sendawo kanye nesikhathi kwenye indawo yesikhathi.
IGeneva Seal luphawu olumele imvelaphi nekhwalithi yezinga. Ngokwesiko, uphawu lwalugxivizwa ensimbini yenhlangano. Kodwa-ke, indlela entsha yokumaka okwenziwe ngomshini ishintsha insimbi ezingeni elincane kakhulu. Ngakho-ke, ngisho nezicucu ezincane kakhulu zomnyakazo zingathwala iGeneva Seal. Ukuze ube noPhawu lweGeneva, ukuhlangana, ukulungiswa, kanye nokufakwa kukasayizi wekhompiyutha kumele kwenzeke eCanton yaseGeneva. Kunemibandela engu-12 eyengeziwe ephathelene nokuqedela, ikhwalithi, nezinto zokwakha ezisetshenzisiwe okufanele zifezekiswe ngobunyoninco. Amalungu ayisishiyagalombili avela eHhovisi Lokuhlolwa Ngokuzithandela Kwamawashi asuka eGeneva (French: Bureau Officiel de l'Etat pour le contrôle facultatif des montres de Genève) aphethe ngokunikeza imvume kumawashi. I-Cartier, i-Vacheron Constantin, i-Roger Dubuis, ne-Chopard bangabanye babakhiqizi abadume kakhulu ukunyakaza kwabo kune-Geneva Seals.
Imivimbo ye-Geneva iqondile, imivimbo ebanzi ehlobisa ukunyakaza futhi kwesinye isikhathi ezinye izinto zokubuka njengomhlobiso. Eyaziwa nangokuthi iCôtes de Gèneve noma amafayili.
Ukudayela kwe-Guilloché kufaka i-guilloché eqeda okuqoshwe ngomshini noma ngesandla. AmaGuillochés angamaphethini ayinkimbinkimbi akhiwe ngochungechunge lwemigqa ehlanganisiwe.
Isithombo sezinwele (esaziwa nangokuthi ibhalansi entwasahlobo) siyingxenye yesondo lokulinganisa. Kungokwesistimu ye-oscillation yewashi lomshini. Iyancipha futhi inwebe kaninginingi kaningi ngomzuzwana futhi inquma ukushaya kwewashi. Isithombo sezinwele sincane kunezinwele zomuntu futhi sinesisindo sama-milligram amabili kuphela. Yenziwe ngento ekhethekile, njenge-alloy Nivarox noma i-anti-magnetic metalloid silicon.
Ukudayela kwe-hand-guillochéd kungukudayela okufaka ukuqeda kwe-guilloché kuqoshwe ngesandla. Njengoba kwenziwa ngesandla, kukhona okungahambi kahle okuncane emigqeni yephethini.
IHardlex crystal ingilazi yezimbiwa esetshenziswa kakhulu nguSeiko. Ngenxa yenqubo ekhethekile, kunzima ukumelana nokuklwebha okwedlula ingilazi ejwayelekile yamaminerali. Ilele phakathi kwengilazi yamaminerali nesafire ngokokuqina.
Helium Ukuphunyuka valve
I-valve ye-helium yokuphunyuka ivikela iwashi lokuntywila ekulimaleni yingcindezi eyeqile. Abatshuzi abangochwepheshe baphefumula inhlanganisela yegesi ekhethekile yokuphefumula efaka i-helium emakamelweni okudambisa amandla. Ama-athomu amancane we-helium angathola indlela yawo ngaphakathi kwecala lokubuka ngaphansi kwengcindezi. Lokhu kungadala ukuthi ingilazi yokubuka iphume lapho abatshuzi bebuyela kwingcindezi ejwayelekile yangaphandle. I-valve isebenza ukulinganisa ingcindezi. Isebenza ngokuzenzekelayo noma ngesandla.
I-Hesalite yigama lika-Omega le-Plexiglas. Akubizi ukukhiqiza nokufaka esikhundleni futhi akuhlukanisi.
Umqhele ohlangothini lwesobunxele
Uchungechunge olunqunyelwe uchungechunge olunenombolo elinganiselwe yamawashi.
Izandla ezikhanyayo zigcotshwe ngento ekhanyayo ekhanya ebumnyameni. Esikhathini esedlule, i-radioactive substance tritium ibisetshenziswa. Umphumela okhanyayo wenziwa lapho amakristalu avela kumakhemikhali e-zinc esabela ngama-electron athunyelwe yi-tritium. Namuhla, into esemqoka esetshenzisiwe yi-Superluminova. Le nto engeyona imisebe yakhiwe ngezinto ezingaphili, i-phosphorescent pigments ebizwa nge-lume. Lapho umthombo okhanyayo ususebenze ngokwanele ama-pigment, aqala ukukhanya. Ukuthi zikhanya isikhathi eside kangakanani kuncike ekutheni zakhanyiselwa isikhathi esingakanani ekukhanyeni. Kodwa-ke, uSuperluminova unenkokhiso elinganiselwe.
Izinombolo ezikhanyayo zigcotshwe ngento ekhanyayo ekhanya ebumnyameni. Esikhathini esedlule, i-radioactive substance tritium ibisetshenziswa. Namuhla, into esemqoka esetshenzisiwe yi-Superluminova. Le nto engeyona imisebe yakhiwe ngezinto ezingaphili, i-phosphorescent pigments ebizwa nge-lume. Lapho umthombo wokukhanya wokufakelwa noma wemvelo ususebenze ngokwanele ama-pigment, aqala ukukhanya.
Umthombo omkhulu, obizwa nangokuthi nje intwasahlobo, ugcina amandla futhi usebenza njengomthombo wamandla wewashi lomshini. Itholakala emgqonyeni futhi ifihliwe ngokufaka iwashi ngesandla ngesandla, noma esimweni sokubuka okuzenzakalelayo, i-Rotor. Iwashi futhi linokuphunyuka ukuze kuvinjelwe imithombo enkulu ekudluliseleni wonke amandla ayo ezitimeleni zamagiya nakwisondo lokulinganisa ngasikhathi sinye. Esikhundleni salokho, ukweqa kuqinisekisa ukukhishwa okulawulwayo esikhathini esiyizinsuku.
Manual emazombezombe uhlobo iwashi ukunyakaza emazombezombe. Intwasahlobo ifihliwe ngokufaka ngesandla umqhele (umqhele-kwound). Intwasahlobo iqhubeka nokudlulisela amandla ayo esitimeleni.
Ingilazi yamaminerali yinto ejwayelekile emazingeni aphansi naphakathi kwamanani entengo. Ifana nengilazi yewindi futhi ilukhuni kunengilazi ye-acrylic, kepha ukumelana okuncane futhi okungatheni kunengilazi yesafire. Ingilazi yamaminerali ingaba lukhuni ukuthuthukisa izimfanelo zayo. Eyaziwa nangokuthi i-crystal crystal.
Ukuphindaphinda umzuzu kuyinkinga echaza isikhathi ngokuzwakalayo ngama-chimes lapho ucindezela inkinobho. Le nkinga eyinkimbinkimbi ngokumangazayo futhi ingenye yezinto eziyivelakancane laphaya. Umshini omncane we-chiming ukhiqiza ama-chimes.
Ukuboniswa kwenyanga kukhombisa inyanga yamanje ekudayelweni.
Inkomba yesigaba senyanga
Isikhombi sesigaba senyanga siyinkinga yokubuka ekhombisa isigaba senyanga njengesibonakala emhlabeni ngosuku ngalunye kusuka enyangeni entsha kuya enyangeni egcwele. Inyanga eyodwa ethatha inyanga ithatha izinsuku ezingama-29, amahora ayi-12, imizuzu engama-44 nemizuzwana engu-2.9. Isigaba senyanga siboniswa nge-disc ehambayo ekhombisa ngewindi ekudayeleni.
Iwashi elisesimweni sokuqala iwashi elisesimweni salo sokuqala, elingashintshiwe ngokuphelele.
Lapho iwashi linezingxenye zoqobo, kusho ukuthi kuphela izingxenye ezisemthethweni ezivela kumkhiqizi ofanele ezisetshenzisiwe lapho kulungiswa futhi kufakwa ezinye izingxenye ewashini.
Ifolishi lepallet liyingxenye yokweqa ngezingalo ezimbili ezime ngo-T. Ixhuma isondo lokuphunyuka kubasebenzi bebhalansi. Imfoloko yamapallet ithola umfutho osuka esondweni lokuphunyuka bese uyidlulisela esondweni lokulinganisa. Ngasikhathi sinye, iphazamisa ukuhamba kwesondo lokuphunyuka. Eyaziwa nangokuthi i-pallet lever noma i-lever yokuphunyuka.
Ikhalenda elingapheli liyinkinga yokubuka ekhombisa usuku olufanele lwekhalenda likaGregory kuze kube unyaka ka-2100 kungekho zilungiso ezidingekayo. Ikhalenda elingapheli lithatha izinyanga ezimfushane nezide futhi liqede iminyaka ekucatshangweni.
I-pin buckle luhlobo lwebhakede lezintambo zewashi. Umkhawulo omude webhande unezimbobo ezifakiwe kuwo. Ukuphela okufushane kunephini langempela, kanye nebha yasentwasahlobo kanye nensimbi enesimo se-U, efana nebhande lokugoqa ibhande. Isebenza ngendlela efanayo: Iphini lifakwa komunye wemigodi ukufeza ubude obufunayo. Isiphathi sensimbi sigcina iphini lingaphumi emgodini. Eyaziwa nangokuthi i-tang buckle.
Indawo yokugcina amandla
Isigcini samandla yisikhathi esithatha ukunyakaza ukuthi sime ngemuva kokulimala ngokuphelele, ngaphandle kokuphindwaphindwa ngesandla noma ukunyakaza komzimba.
Inkomba yokugcina amandla
Inkomba yokugcina amandla ikhombisa ukuthi singakanani isikhathi esisele kuze kube yilapho iwashi eliwumshini liphelelwa amandla. Kukukwazisa ukuthi iwashi lidinga ukulinyazwa nini futhi nini. Iwashi lingalimala ngomqhele.
Isikhombisi se-Precision index
Isihlanganisi senkomba ngokunemba sisiza ukugcina iwashi lisebenza ngokunembile ngangokunokwenzeka. Amawashi alungiswa abe sezikhundleni ezahlukahlukene ngaphansi kwamazinga okushisa ahlukene ukuze awasebenzise ngokunemba ngangokunokwenzeka. Ama-chronometer alungiswa aba sezingeni ezinhlanu ngaphansi kwamazinga okushisa amathathu ukuze afeze izidingo zezikhungo ezisemthethweni zokuhlola ama-chronometer.
Amawashi e-Quartz anikwe amandla yi-quartz crystal. I-crystal idalwa yimanje, okuyenza idlidlizele ngokushesha okukhulu kakhulu njalo ngezikhathi ezingama-32,768 ngomzuzwana. Ukudlidliza okungaguquki kuguqulwa kube ukushaywa kwe-elekthronikhi, okukodwa ngomzuzwana. Lokhu kushayela istep motor ukujika amasondo egiya alawula izandla zewashi. Amawashi e-Quartz avela e-Asia athatha imakethe yomhlaba ngesiphepho ngawo-1970. Zathengiswa ngobuningi bazo ngamanani akhangayo. Bawisa umkhakha wamawashi wendabuko ngesikhathi okuthiwa yiQuartz Crisis. Okwamanje okudingekayo kwewashi le-quartz kuvame ukuvela kubhethri noma kumandla elanga.
Isici sosuku olusheshayo
Isici sosuku olusheshayo, sivumela abagqokayo ukusetha kalula usuku ngomqhele okhishiwe. Ukuhamba ngaphandle kwalesi sici kusetha idethi kuqala ngemuva kwesandla sehora lenze ukujikeleza okugcwele okugcwele. Ebizwa nangokuthi ukulungiswa kwedethi esheshayo.
Inombolo yesithenjwa ilingana nenombolo yemodeli emhlabeni wokubuka. Isebenza njengokuhlonza okuhlukile kwewashi. Inombolo yesithenjwa iyasiza lapho usesha iwashi elithile, njengewashi lokuvuna.
Ukuvuselelwa kabusha kunqenqemeni lokudayela oluthinta ingilazi yokubuka. Kuvame ukusetshenziselwa izikali nokuqoshwa.
Ukuphindaphinda kuyinkinga eyazisa isikhathi ngamasiginali we-acoustic. Indlela ye-chiming isetshenziswa kuma-calibers womshini. Umshini uthola amandla awo kusuka ku-lever eyengeziwe noma ku-push-piece onqenqemeni lwecala. Kunezinhlobo ezinhlanu zokuphindaphinda: ihora, ikota, uhhafu wekota (ihora lesishiyagalombili), imizuzu emihlanu, nokuphindaphinda kwemizuzu. Ukuphindaphinda kukhulisa inani lewashi lesikhathi, ngoba liyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ukwakha.
URolex usebenzisa igama elithi Rolesor ngamawashi ahlanganisa insimbi engagqwali negolide. Igama elithi "bicolor" lisetshenziswa kakhulu lapho kusetshenziswa izinsimbi ezimbili ezahlukene ewashini elilodwa.
I-bezel yiringi ehambayo ezungeze ukudayela kanye nengilazi yokubuka etholakala ezinhlotsheni ezithile zamawashi, njengokuntywila noma amawashi wokushayela.
Amawashi okutshuza anezinhlangothi eziguquguqukayo ezingazungeza ngokuphikisana nokuhamba kwewashi kuphela. Lokhu kuvimbela umuntu ogqokile ukuthi angaguquleli i-bezel ngephutha futhi andise isikhathi sabo sokutshuza. Ngaphambi kokuntywila, i-diver ivumelanisa umaka we-zero ngesandla seminithi. Isikali seminithi engama-60 ku-bezel siyabavumela ukuthi bakwazi ukufunda ukuthi kudlule isikhathi esingakanani.
Amawashi we-Pilot afaka ama-bezels ajikelezayo aqondiswa kabili.
I-Rotor iyinsimbi yensimbi efakwa ngokuguquguqukayo, eyindilinga eliyindilinga eyeyomshini ojikayo wewashi elizenzakalelayo. Lapho iwashi lihamba, i-rotor ishuba intwasahlobo, iwine iwashi.
Ingilazi yesafire yenziwa ngekristalu ekhiqizwa ngokwenziwa. Kunzima kakhulu futhi ukumelana nokuklwebheka ukwedlula amaminerali noma ingilazi ye-acrylic ngakho-ke isetshenziswa kakhulu kumawashi okunethezeka.
Izikulufo zomqhele ezifakwe esikrinini sokubuka zivikelekile. Le ndlela inikela ngokungavinjelwa kwamanzi okuthuthukile ngokungafani nemiqhele efakwa kuphela kuleli cala. I-Rolex Oyster, eyethulwa ngo-1926, yayiyiwashi lokuqala lesihlakala elinomqhele wokugoqa phansi.
Izikulufu zokusunduza ezishiwoyo, ezifana nomqhele wesikulufu-esikhwameni sewashi ngokuphepha. Umshini wandisa ukungavinjelwa kwamanzi kwecala. Izicucu zokusunduza phansi zivame ukusetshenziselwa amawashi angenawo amanzi ekujuleni okwedlulele.
Igolide lakwaSedna libomvu, i-18-karat alloy eyenziwe ngu-Omega. Iqukethe igolide, ithusi ne-palladium.
Bheka emuva kwecala
Amawashi okunethezeka anezinhlayiya zokubona ezinamacala enziwa ngamasafire noma ingilazi yezimbiwa. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuke ukunyakaza okuhambayo.
Ukuvikelwa kokushaqeka wuhlelo oluvikela izingxenye ezibuthakathaka zewashi emonakalisweni odalwe izinto ezifana nokulahla iwashi noma ukulishaya ngento eqinile. Ama-pivots esondo lebhalansi abuthakathaka ikakhulukazi futhi angaba nomonakalo. Ukuvunguza kwensimbi okuncane kumunca ukushaqeka. Iwashi libhekwa njengokushaqeka lapho lingawiswa lisuka ebangeni elingamamitha ayi-1 liqonde endaweni eqondile yokhuni oluqinile futhi lingalimali. Uhlelo oluvame kakhulu lokuvikela ukushaqeka yi-Incabloc, yize abanye abakhiqizi basebenzisa amasistimu abo.
Iwashi lamathambo iwashi elibonisa ukusebenza kwalo kwangaphakathi ngokungafaki izingxenye ezijwayelekile ezifihla ukunyakaza. Amawashi ama-Skeleton noma amawashi ayizingcezu zobuciko ezinhle kakhulu futhi ngenxa yalokho ayinkimbinkimbi ukwakhiwa.
ISuperluminova yigama lomkhiqizo wento ekhanya ngokuluhlaza esetshenziswa ezandleni nasezinkomba. Izinkokhelo zezinto ezibonakalayo lapho zigcinwe ngaphansi kokukhanya bese zikhanya ebumnyameni. Kodwa-ke, ukukhanya kukhanya esikhathini samahora ambalwa. ISuperluminova yinto ekhanya esetshenziswa kakhulu, yize abanye abakhiqizi basebenzisa ezinye izinto. ISuperluminova ayisebenzisi imisebe, ihlukanisa ne-tritium ne-radium. I-Tritium ne-radium yizinto ezinemisebe ebekade ziyizinto ezikhanya ezisetshenziswa kakhulu phambilini. ISuperluminova nayo izinzile ngokwamakhemikhali, okusho ukuthi igcina ukukhanya kwayo iminyaka eminingi.
Amasekhondi amancane yi-subdial ekhombisa imizuzwana yamanje, imvamisa itholakala ngehora lesithupha. Lokhu kuvame ukutholakala kumawashi ephaketheni, amawashi esihlakala ngesandla, nama-chronograph. Umlingani wamasekhondi amancane yimizuzwana emaphakathi, okusho ukuthi isandla sesibili sinamathiselwe kwi-eksisi efanayo nezandla zemizuzu nehora phakathi nendawo yokudayela. Eyaziwa nangokuthi ukudayela kwamasekhondi asizayo.
Ukwehlukanisa imizuzwana chronograph
Bona i-chronograph ephindwe kabili.
Bheka inzalo enkulu
Insimbi engenasici isho ingxubevange noma insimbi engasebenzi enezinga elithile lobumsulwa. Uma kukhulunywa ngamawashi, kubalulekile ukusebenzisa insimbi engagqwali ukuze uvikele ukubola.
Imvamisa, kusetshenziswa insimbi engagqwali engu-316L ekukhiqizeni iwashi. URolex usebenzisa insimbi engagqwali engu-904L. Lezi zingxube zama-rustproof ziqukethe i-chromium ne-nickel futhi zimelana ikakhulukazi nama-asidi nomswakama.
Stop imizuzwana ikuvumela ukusetha iwashi kumzuzwana ngqo. Lapho umqhele ukhishwa, isandla sesibili siyama ukunyakaza. Uma isethwe ngesikhathi esifanele, ucindezela umqhele ubuyele endaweni yawo yasekuqaleni bese isandla sesibili siqala ukuhambisa futhi.
Izikali ze-Tachymetric zisetshenziselwa ukubala amayunithi ngehora. Isikali sisezelini noma emaphethelweni edayela futhi sisetshenziselwa kakhulu ukubala isivinini (km / h noma mph). Isibonelo, uma ushayela ikhilomitha ngenkathi uzibeka isikhathi nge-chronograph yakho futhi kukuthatha imizuzwana engama-28, ungafunda esikalini se-tachymetric ukuthi ijubane lakho laliyi-130 km / h. Amawashi adumile anesilinganiso se-tachymetric yi-Omega Speedmaster Professional neRolex Daytona. Futhi kubhekiselwa kukho njengesikali se-tachometer noma i-tachymeter.
Izikali ze-telemeter zitholakala onqenqemeni lokudayela lwe-chronograph futhi zisetshenziselwa ukubala amabanga. Ungasebenzisa isikali se-telemeter ukukala ukuthi isiphepho sikude kangakanani, isibonelo. Usebenzisa i-chronograph yakho, uqala isikhathi lapho ubona umbani bese uwumisa lapho uzwa ukuduma. Isandla esikhulu sesibili esimisiwe se-chronograph sizokhomba ebangeni elifanele esikalini. Isikali siyasiza futhi ngezikhali zokudubula; ungayisebenzisa ukuthola ukuthi amabutho esitha akude kangakanani kanye namanoni awo asuselwa esikhathini esiphakathi kombani we-muzzle ne-bang.
I-tourbillon iyikhokho eliyindilinga elizungeza yona kanye ngomzuzu. Izingxenye ezibaluleke kakhulu zewashi lomshini zitholakala kuleli kheji: amasistimu we-oscillation ne-escapement. Amandla adonsela phansi anomthelela kulezi zinhlelo futhi adala ukuphambuka okuncane lapho iwashi lihlala lime mpo. Iqiniso lokuthi i-tourbillon izizungeza ngokwalo linxephezela lokhu kuphambuka. U-Abraham-Louis Breguet wasungula i-tourbillon ngo-1795 yamawashi ephaketheni. Namuhla, itholakala kakhulu kumawashi aphezulu okunethezeka. Ukukhiqiza i-tourbillon kudinga ubuciko obuphezulu bezinga eliphakeme.
Igama elithi tricompax lisho ukuhlelwa okuthile kwama-subdials amathathu. Zime ngo-V ngo-3, 6, no-9 ngehora.
Ukungangeni kwamanzi kwewashi kubonakala kubha. Ngaphezu kokufaka kuhlu ukumelana nengcindezi kwewashi, umenzi kaningi ubala nokujula okukhulu kakhulu. Kodwa-ke, leli nani lingadukisa: Amawashi angenawo amanzi kuya ku-30 ​​m (ibha engu-3) empeleni awafanele ukubhukuda, kepha kunamachaphaza wamanzi kuphela. Amawashi okutshuza ngokuvamile awanamanzi okungenani angama-200 m (ibha engama-20). Ukungavinjelwa kwamanzi kuthinteka ngaphezu kwengcindezi yamanzi nje; ukushintshashintsha kwezinga lokushisa nakho kungaba yisici. Ukungavinjelwa kwamanzi nakho kufanele kuhlolwe njalo, ngoba ama-gaskets aguga. Amanzi angene ewashini ngokuvamile avela njengamanzi afingqiwe engilazini yokubuka futhi angasho incithakalo ephelele.
Umshini ojikayo uvunguza inzalo enkulu. Amawashi ephakethe asetshenziselwa ukudinga ukhiye wokufaka i-mainspring (ukhiye-umoya). Kamuva, lokhu kwafakwa umqhele (isiqu-umoya). Kuwashi lesikhathi elizenzakalelayo, isisindo esihehayo, i-rotor, senza lo msebenzi.
Isibonisi sonyaka sikhombisa unyaka wamanje ekudayeleni
Ingabe unemibuzo? Xhumana nathi!
(800) 571-7765 noma usizo@watchrapport.com